Traintravel Archives | Save A tareenka
Dabeecadda reer Yurub iyo muuqaallada dhulbahante ayaa dhiirrigeliyay sheekooyinka sheekooyinka. Dhulalka ballaaran waxay hoy u yihiin jidad socod lug ah oo la yaab leh oo u horseeda qaar ka mid ah cajaa'ibyada aan caadiga ahayn ee adduunka. Godad-la-xusuusiyay ee Hungary, Grand Canyon oo leh biyo turjum leh oo ku yaal Faransiiska, jasiiradaha-barafka ee Austria, iyo…
Safarka iyo ogaashada meelaha cusub waxay ina siisaa baalasho aan ku riyoonno, ku dhiirran, oo wax bartaan. Adduunyada sidan u balaadhan, inta badan macquul ma ahan in wax walba la arko, sidoo kale suurtagal maaha in la arko oo lagu raaxeysto meel kasta oo Yurub ka mid ah. Iyada oo meelo aad u xiiso badan, kaliya waad awoodaa…
gaadiidka, qaab kasta, waa laf dhabarta dal kasta iyo dhaqaalaheeda. Waxay ahayd kaliya wadooyinka, rail, iyo hawada aan ugu suurta gelinay inaan ku xirno adduunka qaab aad uga yar sidii ay dhab ahaantii tahay. Sayidka, when we look…
Joogitaanka qaab ahaan inta aad safreyso shaki la'aan waa caqabad. Cunnooyinka duubitaanka marwalba waa la bixiyaa. Tani waxaa lagu daraa nasasho ah oo ku saabsan jadwalkaaga caadiga ah ee jimicsiga oo badanaa kuu horseedaya inaad ka dhacaan gaari-taaga jirdhiska. Marka sidee qofku isku habboonaan karaa intuu safrayo? Waa…